आत्मविश्वासले कोरोनालाई जिते : विन्दु आचार्य – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ आत्मविश्वासले कोरोनालाई जिते : विन्दु आचार्य
आत्मविश्वासले कोरोनालाई जिते : विन्दु आचार्य
सुर्य बहादुर खवास वैशाख ३०, २०७७ गते २:५४ मा प्रकाशित
युएई – जीवनका ठूला सफ़लताहरु मध्ये एक हो, उपचार नै नभएको रोग माथि विजय प्राप्त गर्नु । कोरोना कहर यतिबेला संसारभर नै महामारीका रुपमा देखिएको छ । औषधि नै पत्ता नलागेको र कुनै उपचार नै सम्भावना नरहेको रोग संग लड्नु आफैँमा ठूलो चुनौती हो । बलियो आत्मबल र दैनिकीलाई अनुशाशित बनाउँदै आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँन सकियो भने सहजै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेकी एक युवा नारीहुन् झापाकि विन्दु आचार्य । प्रस्तुत छ दीपसंचार कर्मी सुर्य बहादुर खवासले आचार्य संग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
वैदेशिक रोजगारिको शिलशिलामा विगत ८ वर्ष देखि युएईमा कार्यरत छु । हाउस किपिङ्को काम सामुहिक रुपमा गर्नुपर्ने । डियुटी हस्पिटलमा भएकाले काम राम्रै सँग चलिरहेको थियो । यसै बिचमा कोरोना भाइरसको हल्ला जोडतोडले चल्न थाल्यो । जसको प्रत्यक्ष असर मेरो काममा पनि पर्दै थियो ।
कोरोना भाइरसको कसैलाई सर्‍यो कि भन्ने चिन्त्ता सबै हुनु स्वभाविक हो । अझ म काम गर्ने ठाउँमा कोरोनाको परिक्षण हुने हुँदा स्वभाविक रुपले चिन्ता थियो नै तर म मा त्यस्तो कुनै लक्षण भने थिएन, त्यसैले म ढुक्क थिए । यसै शिलशिलामा एक दिन डाक्टरहरुको सल्लाहमा नै कोरोनाको परिक्षण गरिएको थियो । परिक्षण गरेको ३ दिन पछि रिपोर्ट आयो तर पोजेटिभ ।
मलाई कोरोना सङ्क्रमण भन्ने थाहा पाउँदा पहिले त निक्कै डर लाग्यो, अब के होला ? सोच्न सक्ने अवस्था थिएन । घरपरिवारबाट टाडा सात समुन्द्रपारी बिरानो मुलुकमा कोरोना परिक्षण पोजेटिभ आएका दिन एकछिन त सबै शून्य शून्य लाग्यो अब के हुने हो भन्ने चिन्ताले आकुलव्याकुल बनायो । मैले मेरो रिपोर्ट बारे कम्पनिको म्यानेजरलाई जानकारी गराए । कम्पनिले यो अवस्थामा धेरै सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्‍यो । जसले कोरोनासँग लड्न केही आत्मबल मिल्यो । पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछी मैले काम गर्ने हस्पिटल क्लिपल्याड क्लिनिकमा नै भर्ना गरियो । त्यहा मेरो स्वाव टेष्ट, एक्सरे, इसिजी र बल्ड टेष्टहरु गर्‍यो । ४ दिन हस्पिटलमा उपचार पश्चात् मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अहिले म १४ दिनको क्वारेन्टाइन पूरा गरि नियमित काममा फर्किएकी छु ।
कोरोना भाइरसको हल्ला व्यापक थियो । यसरी सर्न सक्छ भन्ने । मैले पनि सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको त हैन तर अपनाउदा अपनाउँदै पनि मलाई कोरोना पोजेटिभ भएको पुष्टि भयो । शुरुको दिनमा मन अलि आत्तियो । कतै म पनि मरि पो हाल्ने हुँ कि भनेर निकै डर लाग्यो । नलागोस पनि कसरी ? विश्वभरी कोरोनाले मान्छे मरेको समाचारहरु बग्रेल्ती सामाजिक संजालहरुमा पढ्दै आएकी थिए ।
मलाई पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछी घरमा ममिलाइ यसबारे बताए । ममिले आत्तिनु पर्दैन के हुन्न भनेर हौसला प्रदान गर्नु भयो जसले मलाई कोरोनासँगको लडाईमा सहयोग पुर्‍यायो । क्वारेन्टाइनमा सामान्यतया तातोपानी पिउने, पानीको बाफ लिने निरन्तर गरे । घरमा नियमित कुरा भैरहन्थ्यो जसले आफ्नो परिवारसँगै भएको महसुस गराउथ्यो। घर परिवारसंगको निरन्तर सम्पर्कले मलाई मनमा गलत सोचाईहरु आउन दिएन । कोरोनासँगको जितमा मेरो परिवार, आफन्त, साथीभाइ सबैको हौसलाले ठूलो काम गरेको छ । समग्रमा भन्नू पर्दा मेरो आत्मविश्वासले नै कोरोनालाई जितें ।
शरीर कमजोर भएका बेला मनमा अनेकन कुरा खेल्छन । जसले आफुलाई मानसिक रुपले कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कोरोनासँग लडिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने मनमा धेरै चिन्ता नलिनुस, आत्मबल घट्न नदिनुस, पौस्टिक तत्व भएका खानेकुरा र नियमित तातोपानी लिरहनुस कोरोनालाई अवश्य जित्नु हुनेछ ।